Filtrer les éléments par date : vendredi, 21 juillet 2017
vendredi, 21 juillet 2017 14:09
Sambava : Fitaovam-pamarana sy fandanjana tsy ara-dalàna maro no noraofina
Miakatra izay tsy izy ny vidim-piainana, manampy trotraka ireo fanararaotana, ny fitaka sy katramo atao amin'ny mpanjifa. Nanao bemidina ny Polisy Monisipaly Sambava, vokany kapoaka famarana miisa 50 mahery miampy mizana ampolony sy vato mizana tsy ara-dalàna no sarona ka noraofina tamin'ireo tsena miisa telo eto Sambava dia Ambodisatrana-Antaimby ary Antanifotsy.
Tsy faly tamin'izao fanaraha-maso ireo mpivarokena izay tena nahitana mizana sy vato mizana tsy ara-dalàna ka nanakiana ny Polisy Monisipaly ary nangataka amin'ny Ben'ny Tanàna mba hitondra fanazavana amin'ny nanomezana alalana ireto hanao ny asan'ny mpanaramaso ny varotra.
SAVA : Manome roa volana ireo Ben'ny tanàna tsy nanao fanambaram-pananana ny Bianco
Namoha birao vonjimaika eto Sambava mandritra ny tapa-bolana ny Bianco hoy ny talem-paritra Antsiranana, Razakamanatsoa Gaby Nestor. Mandritra izany no handraisana ny fitarainana avy amin'ny olona rehetra ary hanaovana fanadihadiana.
Manome roa volana ireo Ben'ny tanàna ihany koa ny Bianco hanao fanambaram-pananana. Handefasana fanairana farany ireo rehetra tokony hanao fanambaram-panana tsy hifanomezan-tsiny, hoy hatrany Razakamanatsoa Gaby Nestor. Tanjona ny hamongorana ny kolikoly manerana an'i Madagasikara.
Dia rehefa miala eto Sambava ve ny Bianco afaka tapa-bolana dia miato eto koa ny ady amin'ny kolikoly aty SAVA ?
vendredi, 21 juillet 2017 12:13
Bekopaka : Notafihin'ny jiolahy ny biraon'ny Madagascar National Park
Efa-dahy no niditra ny biraon'ny MNP tao Bekopaka omaly alakamisy 20 jolay tokony ho tamin'ny telo maraina. Vaky nandositra ny mpiambina. Ny coffre no nezahin'izy ireo nobataina saingy mifatratra mafy amin'ny simenitra ka tsy afaka hany ka niala maina ny mpandroba.
vendredi, 21 juillet 2017 12:05
Fianarantsoa : Rallye Haute Matsiatra andiany voalohany
Mian-dahy miam-bavy ny fandraisana anjara amin'ny dingana fahatelo amin'ny fiadiana ny tompondakan'i Madagasikara tanterahana eto Matsiatra Ambony ity. 19 no isan'ireo tarika mifaninana.
Slalom teto Fianarantsoa renivohitra no nanombohana izany ny tolakandron'ny omaly alakamisy 20 jolay, hitohy amin'ny fidinana ifotony any amin'ny Distrikan'i Vohibato sy Isandra izany ka hiverina eto ihany.
Mahaliana ny mponina eto an-toerana ny hetsika amin'ny ankapobeny. Sambany rahateo izao no isian'ny fanentanana tahaka izao.
Mahajanga : Jiolahy telolahy sarona niaraka tamin'ny basy
Nody ventiny ny rano nantsakain'ny polisim-pirenena teto Mahajanga. Tsy navelan'izy ireo raha tsy tra-tehaka ireo jiolahy anisan'ny nampihorohoro an'i Mahajanga tampon-tanana.
Sarona ny 17 jolay teo ireo telolahy tompon'antoka tamina fanafihana mitam-piadiana nisesisesy taty an-toerana. Anisan'ny lasibatra tamin'izany ny mpivarotra enta-madinika teny Ambalavola vakim-paritra faharoa ny 17 jona teo.
Nahatratrarana basy Pistolet Automatique MAC 50 niaraka tamina bala 9 mm miisa 9 tany amin'ireto telolahy ireto. Mbola teo ampiketrehana halatra hafa indray izy ireo no voasambotra teny akaikin'ny tobim-piantsonana rezionaly. Androany no natolotra ny fampanoavana Izy telolahy ireto.